ဘလော့ဂ်တွေကို လည်ပတ်မိတော့ Spring လို့ခေါ်တဲ့ နွေဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တွေ့ရတယ်။ ရာသီဥတု လေးမျိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ နွေဦးရာသီကိုက ရာသီတစ်ခုပေါ့။ ရာသီဥတု သုံးမျိုးရှိတဲ့ အမိမြေမှာတော့ နွေရဲ့အဦးကာလမို့ နွေဦးလို့ ခေါ်နိုင်တာပဲ။ ရာသီဥတုလို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိတဲ့ ဟောသည် နေရာကနေ ကိုယ်က သည်လို လွမ်းမိပါတယ်။
တပေါင်းညှာကျင် လို့ ကဗျာဆန်ဆန်
နွေဦးရေ… လို့ အခါခါဟစ်ခေါ်လည်း
နွေဦးတွေ့နေသူတွေက ကိုယ်ပိုင်နွေဦးမှ မဟုတ်တာ.. တဲ့
အဝေးမြေက နွေအစစ်ကလည်း နွေမလှတာ ကြာမှပေါ့… တဲ့
ရာသီဥတုဆိုတာ ပြားချပ်နေတဲ့ ငါ့ကျွန်းကလေးမှာလည်း
ငါတို့ နွေဦးကို ဘယ်သူ ခြွေခူးသွားခဲ့သလဲ။။
ရွေးစရာ စကားလုံး မရှိတော့လို့ ကဗျာရဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်းကလေးကို ဒီက ယူပါသည်။
Posted by pandora at 5:32 PM
အခုဆို အီစတာ အားလပ်ရက်။ မေတ္တာတရားအကြောင်း ဟောပြောမိလို့ လူတယောက် ကားစင်အတင်ခံခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေပေါ့။ သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သူဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုးးထခဲ့တယ်။ အီစတာပြီးတာနဲ့ နွေဦးက ဆိုက်ရောက်လာ။ အားလုံး ပြန်လည်ရှင်သန်နိုးထကြတဲ့ နွေဦး။ အရင်တုန်းက တပေါင်းလ မတ်လပုံရိပ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့သွေးတွေကို ပူနွေးစေခဲ့တဲ့ ရဲရဲနွေရဲ့ ရာသီဦး။ အခု ဥရောပမြေပေါ်မှာ ဆောင်းဦးတုန်းက အရွက်တွေအခြွေခံခဲ့ရ၊ အကိုင်းအလက်သက်သက်နဲ့ တဆောင်းလုံး အထီးကျန်သွေ့ခမ်းခဲ့ရတဲ့ သစ်ပင်တွေမှာ ပုရစ်ဖူးကလေးတွေ ပြူလှစ်လာပုံ မြင်ရတော့ ကံကြမ္မာပေါ် ကားစင်အတင်ခံခဲ့ရတဲ့ဘ၀တွေကို ဒီအချိန်မှာ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုးထစေချင်မိတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ အမြဲတမ်း အရွက်တွေကြွေနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော်တို့နွေဦး ဖူးတွေ့ဖို့ မဝေးတော့ပါ။
ပန်ပန်က နွေဦးပျောက်နေတယ် ဆိုပဲ
သြော် နွေဦးရောက်ပြီး နှင်းလည်း ပျောက်ပြီပဲ ကြားဖူးပါတယ်...
ဘန်နာ ပြောင်းလိုက်တာလား ပန်ပန်
မိုက်တယ်... မရောက်တာကြာလို့ သတိမထားမိဘူးတော့
ဘန်နာ အသစ်လေးကိုတွေ့ တော့ ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ "ကြာနီတစ်ပွင့် ဖြူတစ်ပွင့် တဲနဲ့ပနံတင့်" ဆိုတဲ့ ကဗျာတစ်ပိုင်းတစ်စကို သတိရ...
ဒါပေမယ့် တဲကလေးကိုတော့ မတွေ့ ရ...။
ကိုဝေလင်း.. အဲဒီနေ့ကို စောင့်နေကြပါတယ်။ မှတ်ချက်အရှည်ကြီး သေသေချာချာရေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
Ma Thyda.. ဟုတ် .. ရေးကောင်း ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.
ပင့်ဂိုးလ်.. သက်ဝေ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပါ။
နွေဦးက ခံစားတတ်သူအတွက် ရင်ဘတ်နဲ့အပြည့် ခံစားစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ဖြစ်စေတယ်။ မပန်ရဲ့ ရင်ထဲက ကဗျာလေးကလည်း နွေဦးနဲ့အတူ ရသပေါင်းစုံကို ခံစားလိုက်ရတယ်။
Great ma pan. How'sapreety poem.
I also miss our spring in our home town......But I can't create like this master piece.. You r really great...